काठमाडौं । ‘प्रधानन्त्रीको भारत भ्रमण अगाडीनै मन्त्रिपरिषदमा सहभागि हुने र भ्रमणको दलको सदस्य भएर भारत समेत जाने’ प्रधानमनत्री केपीशर्मा ओली र संघीय समाजवादी फोरम नेपालबीच सहमति भएको थियो । तर प्रधानम...
साँझको पाँच बज्नै लागेको थियो । गर्मीसंगै सुरु भएको हावाहुरी चल्ने मौसममा एक्कासी पानी पर्ला झैं भएर आकाशमा बादल मडारीरहेको थियो । ललितपुरस्थित कुसुन्ती हाइटमा रहेको एउटा पर्खालसहितको घरमा खुलेको आकाश...
काठमाडाै‌ । उद्योग बार्णिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले सोमबार एउटा विषयमा सचिवसँग परामर्श गर्ने विचार गरे । आपूर्ती ब्यवस्थापन, मूल्य बृद्धि, अनुगमनका विषयमा छलफल गर्ने विचार गरे पनि उन...
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिब नेत्रबिक्रम चन्द विप्लबलाई पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालित भएको छ । जिल्ला अदालत भोजपुरले पक्राउ गरी उपस्थित गराउन आदेश दिएकाले प्रहरीले खोजीलाई तिब्रता दिएको ...
काठमाडौं । प्रहरी, तस्कर, कर्मचारी, राजनीतिकदलका केही नेताबीच ठूलो साँठगाठ रहेको सरकारले निस्कर्ष निकालेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले छोटो समयको निस्कर्ष सुनाउँदै मिलेमतोमा कमिसनको खेल भइरहे...
यी गाँठो फुकेनन्, एमाले–माओवादी एकता तत्काल नहुने
काठमाडौँ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकता प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणअघि नै गर्ने प्रयास गरिएपनि सम्भव नहुने भएको छ । राजनीतिक र सांगठनिक तथा विधान कार्यदलले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रु...
बाँझो जमिन खोसिने, किनबेचमा रोक्का गरिँदै
काठमाडौं । तपार्इँले आफ्नो जमिन खेती नगरेर बाँझो राख्नु भएको छ ? छ भने कि तपाईले तत्काल कुनै खेती गर्नुपर्नेछ नभए त्यो जमिन तपाईबाट खोसिनेछ । सरकारले जमिन बाँझो राख्ने किसानबाट खोसेर उपयोग गर्ने भएको ...
काठमाडौं । म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुन अहिले काठमाडौंमा छन् । उनी गाउँपालिकाको कामले भने आएकी होइनन । गाउँपालिकाले बनाउन लागेको संगठनको अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकबह...
संस्कार बिर्से छोराछोरीले
तपाई मध्ये कत्तिले आमालाई आमा र बुवालाई बुवा नै भनेर सम्वोधन गर्नुहुन्छ ? उत्तर सजिलै दिनुहोला । बुवाआमालाई बुवा आमा नभनेर अनि के भन्ने त ? तर शहरमा बुवा आमालाई बुवा–आमा भन्न छाडिएको छ । गाउँमा पनि त्...
काठमाडौं । प्रधामन्त्री केपीशर्मा ओलीले चैत ८ गते गृह, रक्षामन्त्रालय सहित सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिए ‘१५ हजार सुरक्षाकर्मी उच्चपदस्थको घरमा घरेलु काम गर्न विवश रहेको पाइएको छ तत्काल फिर्त...
दोहोरो कमिसन, नक्कली कारोबार
काठमाडौं । जाजरकोटका दिनेश बुढा रोजगारीकालागि मलेसिया जान २ लाख ४० हजार रुपैयाँ म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाउँदै छन् । एक लाख ४० हजार रुपैया बुझाई सकेका उनले बाँकी एक लाख रुपैँया पनि बुझाउने तयारी गरिरहेक...
ओली–मोदी सम्बन्धका उतारचढाव : भारतले कसरी फेर्‍यो अडान ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २३ चैतमा भारत भ्रमण गर्ने तय भएको छ । भ्रमण तीन दिन अर्थात् २५ गतेसम्म हुनेछ । दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयको आन्तरिक गृहकार्यपछि ओलीको भ्रमण मिति तय भएको हो । –१७ असोजमा एम...
हेलिकप्टर चार्टर गरि सुत्केरी महिलाको ज्यान जोगियो
काठमाडौं । अत्यधिक रक्तश्रावका कारण मृत्युको मुखमा परेकी एक सुत्केरी महिलाको उद्दार भएको छ । महाकुलुङ गाउपालिका वडा २ सोलुखुम्बु पेल्माङ तिन्दुमा बस्ने कालुमान कुलुङ कि श्रीमती रानीसिता कुलुङ को साल अ...
सुन्तलीले मोडिएकी सुमित्रा भन्छिन्–सेवा गर्दा एकदुई जनाले पिटे पनि
काठमाडौँ । सञ्चार क्षेत्रमा लागेपछि प्रायःले पेशा चटक्कै छाडेर अन्य क्षेत्रमा हात हाल्न रुचाउँदैनन् । तर मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकास्थित मयुरधापकी २७ वर्षे सुमित्रा चौलागाईँलाई भने सञ्चारक्षेत्...
प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रचण्डको गोप्य छलफल, सांसद चौधरीलाई रिहा नगर्ने
काठमाडौं । सरकारले सांसद रमेश चौधरी रेशमलाई रिहा नगर्ने भएको छ । प्रहरीको सबै अनुसन्धानबाट उनी टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार रहेको प्रमाणित भएको निस्कर्षसहित उनलाई रिहा गर्दा गलत सन्देश जाने भन्दै सरक...